Muxuu Obama dhab ahaantii ka aaminsanaa Erdogan iyo madaxda kale ee caalamka? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Muxuu Obama dhab ahaantii ka aaminsanaa Erdogan iyo madaxda kale ee caalamka?
Muxuu Obama dhab ahaantii ka aaminsanaa Erdogan iyo madaxda kale ee caalamka?
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku sifeeyey Vladimir Putin-ka Ruushka inuu yahay sidii maamule waadh cusbitaal, halka uu ku sifeeyey madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy in “aftahamadiisu sarrayso”” buugga xusuusqorkiisa oo ka koobnaan doona laba qaybood.
Buuggan oo lagu magacaabo A Promised Land ayaa ilaa iyo hadda la iibsaday ku dhawaad 890,000 oo nuqul dalalka US iyo Canada afar iyo labaatankii saac ee u danbeeyey, taas oo noqonaysa rikoodh cusub oo daabacadeed oo u dhigmaysa shirkadda daabacaadda Penguin Random House. Waxaana la filayaa in uu noqdo buuggii xasuusqor madaxweyne ah kii ugu iibsiga badnaa taariikhda.
Buuggan, ayaa Mr Obama ku xusayaa socdaalladiisii dunida xilligaa uu ahaa madaxweynihii 44-aad ee Maraykanka iyo kulamadiisii uu la yeeshay hoggaamiyayaasha caalamka. Taas oo ah, yaa u waajahay si wacan iyo yaa si kale u waajahay?
Ra’iisul wasaarihii dalka UK ee muddo xileedkii 2010-2016 wuxuu ahaa “reer magaal iyo shakhsi isku kalsoon” wuxuuna lahaa “kalsooni fudud oo ka dhigayay sidii qof aan waligiis noloshu culays saarin”.
Mr Obama wuxuu sheegay in hogaamiyaha Ruushka uu xasuusiyay baroonadii siyaasadeed ee uu la kulmay intii uu ku guda jiray xirfadiisa hore ee Chicago. Wuxuu qorayaa inuu ahaa “sidii maamul cisbitaal degmo, marka laga reebo inuu u dheereyd inuu hayay furaha hubka nukliyeerka iyo diidmada qayaxan ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay”.
Wuu sii waday: “Putin xaqiiqdii wuxuu i xasuusiyay noocyada raggii horey u soo maamulay ururadii Chicago ama Tammany Hall [urur siyaasadeed ka dhisan magaalada New York] – adadkaanta, caqlibadnaanta, oo aan la garanayn shakhsiyaad ogaa waxay ogaayeen, kuwaas oo aan waligood u dhaqaaqin meel ka baxsan waaya-aragnimadooda cidhiidhiga ah, isla markaana u arkay u-adeegsiga, laaluushka, in hoos gacmaha la isu saaro, khayaanada, iyo rabshadahu in ay mararka qaarkood yihiin aalado ganacsi oo sharci ah. “
Hogaamiyaha Jarmalka wuxuu ku Obama ku tilmaamay inau tahay “mid deggan, daacad ah, caqli ahaan adag, oo dabiiciyan naxariis leh”. Mr Obama wuxuu xusayaa in markii hore ay isaga ka shakisneyd, sababtoo ah aftahamidiisa iyo xirfadiisa hadalka. “Wax dambi ah kamaan qaadin, aniga oo ku xisaabtamaya in ay tahay hogaamiye Jarmal ah”
Mr Obama ayaa u arkayey hogaamiyaha Turkiga inuu yahay kuna qexay “mid saaxiibtinnimo qumman lahaa oo guud ahaan ka jawaaba codsigeyga”.
“Laakiin markasta oo aan dhagaysto isaga oo hadlaya, qaab dhererkiisii soo yara godanayey iyo hab hadalkiisii uu badanaa ku sheegi jirey cabashooyinka kala duwan. Waxaan ka dareemayey aragti ah in ballanqaadkiisa dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga uu sii jiri karo kaliya inta ay ilaalinayaan awooddiisa. “
Previous articleSAWIRO: Shir Muqdisho uga furmay Musharaxiinta xilka Madaxweynaha+Wararkii ugu danbeeyay
Next articleNin ku faanay in uu gudaha u galay Twitterka Madaxweynne Trump oo Su’aalo la weediiyay
DAAWO: Puntland oo Ciidamo Cusub geysay Aagga Tukaraq iyo Eng.C.xakiim Camey….
XOG: DF Somalia oo Hub casri ah ka heleysa Itoobiya & Warar sheegaya….
SAWIRRO: Wafdi ka socda xukuumadda Burma oo Roghingya kula kulmay xero qaxooti oo ay ku jiraan
Xubno ka mid ah xafiiska Midowga Yurub ee Somalia oo cudurka Coronavirus laga helay
Maxay tujaarta caalamka u iibsanayaan baasaboorka Malta?
DHAGEYSO:Maxaadan Ogeyn oo kayiraahdeyn shacabka Muqdisho amarkii MD Farmaajo kasoo baxay oo ahaa
Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay gobolka Baay & Faah faahin
Murashax miisaan culus, Jabriil Cabdulle, oo maanta kusoo wajahan Muqdisho
Sawirro:Ciidamo aad u hubeysan oo lawareegay mid kamid ah garoomada ugu waa weyn Soomaaliya xili diyaarado..